Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao. Ilay voalazako taminareo ihany hoe: Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Ataovy ihany araka izay nolazainao. Angamba folo no ho hita ao.
Le 03 Juillet 5 pages. Amin ny fividianana baiboly sy fihiranaary fanaka 25 nov. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky? Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny. Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany. Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany.
Biaboly 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary taorian’izany ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony.
Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran’ny lay, izay teo ivohon’Ilay niteny. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah.
Donnez votre avis sur ce fichier PDF Rentrez votre texte. Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy.
Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany.
Ary nahoana no manjombona ny tarehinao?
Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako.
Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao.
Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho? Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin’ny tanin’ny fahoriako.
Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby pdr na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Fa hoy Ilay niteny: Est-ce-que quelqu’un peut m’aider?
Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho, 44 ka hamaly hoe izy: Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va? Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao.
Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama. Ireo no zanak’i Esao, izay naterany tany amin’ny tany Kanana.
Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka baaiboly olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay.
Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Ireo no zanakalahin’i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia. Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, bajboly aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay bziboly akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.
Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny bsiboly, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho?
Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Aza an’izany, Tompo ô! Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Alao io zazavavy io ho vadiko.